NewsFrames · Global Voices teny Malagasy
Tantara mikasika ny NewsFrames
Mediam-bahoaka 10 Jolay 2019
Amin'ity mihitsan-dravina ity, ankoatra ny fizàrana amin'ny Global Voices sy ny fiaraha-miasa efa an-dalana miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka ao amin'ny MediaCloud, dia manana zavatra maromaro miandry isika: fihaonana ao amin'ny MIT amin'ity volana ity momba ny famoronana rindrambaiko, izay manome antoka fa mahavita ny fampanantenany ho an'ny Global Voices ny NewsFrames.
“Ankehitriny efa mizotra mankany amin'ny fandriampahalemana izahay eto Colombia, ka tena zava-dehibe ao anatin'izany ny feon'ny vehivavy”
Amerika Latina 08 Jona 2018
Singa iray tiako misongadina ny fandraisana anjara ara-politika. Niady ho ao amin'io lohahevitra io izahay satria tsy afa-nahatontosa izany aloha, saingy mbola miroso ho amin'izany izahay.
"...vehivavy tompotany izahay, kolontsaina izahay, fomban-drazana izahay, fizakana ara-tany izahay, izahay no mpiaro sy mpiatoka amin'ny fikolokoloana an'i Neny Natiora."
“Ny herisetra no tsirinkevitra hiadiankevitra”
Amerika Latina 04 Jona 2018
Mino aho fa mahaliana ny mihevitra ireo voambolana mifandraika amin'ny "herisetra" mikasika ny ady amin'ny zom-pirenena Shuar, satria voambolana niezahan'ny tsirairay lazaina sy faritana izany. Ny herisetra no tsirinkevitra hiadiankevitra, ary mino aho fa mampiseho izany ity sary ity.
Mpikambana Ao Amin'ny NewsFrames Slack Ve Ianao?
Mediam-bahoaka 14 Marsa 2018
Miarahaba antsika rehetra, indro misy fampahafantaràna ny NewsFrames, miampy ny antsipirihany mikasika ny toerana itafatafan'ny olon-drehetra momba ireo tetikasa NewsFrames.
Mediam-bahoaka 03 Febroary 2018